धुपौरे’ नगरे अनमोल पुन होम प्रडक्सनमा ‘एन्टी हिरो’ मा फर्कन सक्ने !! - Experience Best News from Nepal
१मेस्सी रोनाल्डोमा विशिष्ट खेलाडीको मुद्धाको अन्त्य !! पेलेको तथ्यांकमा को उत्कृस्ट !!
२मेस्सी बने शताब्दी कै उत्कृस्ट खेलाडी, रोनाल्डो दोश्रो !! हेर्नुहोस अन्तिम २० खेलाडीको सुची !!
३कोरियामा नेपाली नारीका अश्लिल भिडियो छ्यापछ्याप्ति, यसरी हालिएको छ भिडियोहरु
४बलिउड सुपरस्टार आमिर खानकी छोरीको यस्तो हर्कत !! सामाजिक संजालमा भाइरल
५शारीरिक सम्पर्क गर्दा स्तन मिच्ने कि नमिच्ने ?
७जागिर नै जोगाइदिएका मेस्सी प्रति के भन्छन भल्भार्डे !!
८अन्तर्राष्ट्रिय गोल संख्यामा रोनाल्डोको छलांङ्ग !! ६ गोलको जितमा रोनाल्डोको ९ औ ह्याट्रिक !!
धुपौरे’ नगरे अनमोल पुन होम प्रडक्सनमा ‘एन्टी हिरो’ मा फर्कन सक्ने !!
प्रकाशित मिति : सोम, कार्तिक २५, २०७६
पछिल्लो समयका लोकप्रिय अभिनेता हुन्, अनमोल केसी । अनमोलका चलचित्रलाई दर्शकले निकै आशा राख्छन् । उनले काम गरेका अधिकांश चलचित्र फ्लोरमा गएसँगै चर्चामा रहने गर्छन् ।
अनमोलप्रति निर्माताको केहि बढि विश्वास छ । किनभने, अनमोलले अरु कलाकारको तुलनामा निर्माताको लगानी सुरक्षित गर्ने सम्भावना बढि हुन्छ ।
छायांकनमा जाने अन्तिम तयारी भैरहेका बेला एक्कासी अनमोलले साम्तेन भुटियाको निर्देशनमा बन्न लागेको चलचित्र ‘धुपौरे’बाट हात झिकेका छन् । उनले चलचित्रको स्क्रिप्टमा तयारी नपुगेको भन्दै केहि मिहेनत गरेर मात्रै छायांकनमा जान निर्माण पक्षलाई सुझाएका थिए । श्रोत भन्छ, ‘अनमोलले केहि ढिला गरेर जाऔं भन्ने तर निर्माण पक्षले तुरुन्तै छायांकनमा जाऔं भन्दा अनमोलले नमान्ने कुरा आयो । सोहि कारण अनमोल यो चलचित्रबाट बाहिरिएको हुन सक्छ ।’
केहि महिनादेखि यो चलचित्रको काममा व्यस्त अनमोलले अब यो चलचित्रबाट हात झिकेपछि अरु कुन प्रोजेक्टमा केन्द्रित हुन्छन् ? धेरैको चासोको विषय बनेको छ ।
अनमोलले काम गर्नेहो भने निर्माता माधव वाग्लेको चलचित्र ‘पारस’ पुर्ण रुपमा छायांकनमा जान तयार छ । अनमोलकै लागी लेखिएको यो चलचित्रको स्क्रिप्ट फाइनल समेत भैसकेको छ । तर, तुरुन्तै छायांकनमा जानका लागी एउटै कुराले रोकेको छ, – निर्देशक को बन्ने ?
अहिले अनमोलका बा भुवन केसीसँग निर्माता माधव वाग्लेको कुरा भैरहेको छ । खासमा माधव वाग्ले निर्देशक बन्न खोजिरहेका छन् । वाग्लेका अनुसार लामो समयदेखि चलचित्र क्षेत्रमा अनुभव रहेकाले राम्रो चलचित्र बनाउन सक्छु भन्ने उनलाई लागेको छ । तर, भुवन केसीले भने यो कुरा मान्न तयार छैनन् । भुवनले सकेसम्म निर्देशनमा अरु कोहि ल्याउन र आफुहरु पछाडीबाट सहयोग गरौं भनिरहेका छन् । तर, माधव वाग्लेले अनमोललाई हिरो बनाएर आफु निर्देशनमा चम्किन खोजिरहेका छन् । यदि यो चलचित्रमा अनमोलले काम गरेनन् भने उनी होमप्रोडक्सनबाट निर्माण हुने चलचित्र ‘एन्टि हिरो’ मै केन्द्रित हुने सम्भावना छ ।
भुवनका अनुसार अनमोलले यदि ‘पारस’मा काम गरेनन् भने ‘एन्टि हिरो’कै काममा व्यस्त हुने पक्का छ । हाल स्क्रिप्टको काम अन्तिम तयारीमा छ, भुवनले थपे, ‘अनमोल अहिले यहि चलचित्रको काममा बढि केन्द्रित छ ।’
दशैंमा सार्वजनिक गर्ने योजना रहेको यो चलचित्र दुई महिना भित्रै छायांकनमा जाने भुवन केसीको योजना छ ।
अनमोलले किने जिप कम्पास !! यस्तो छ उक्त गाडको विशेषता
सब प्रडक्सन छाडेर अन्तत अनमोल सुहानासंगको ‘ए मेरो हजुर ४’ मा, आखिर किन !!
एन्टी हिरो छाडेका अनमोलले ‘धुपौरे’ पनि छाडे !! अनमोलले ‘धुपौरे’ किन छोड्दै छन् !!
‘एन्टी हिरो’ मा अनमोलको जोडी जसिता
जब विहेको कुराले ज्योतिलाई सताएपछि, फेसबुकमा ज्योतिको स्टाट्स !!
किसमय प्रियंका आयुषमानको लभ लाइफ !!
जीप लाइनमै प्रियंका–आयूष्मानको ‘चुम्माचाटी’
फेरी पहिरन कै कारण ट्रोलको चेपमा बर्षा !!
प्रियंका आफैले खोलिन आफ्नो पतिको टप सेक्रेट बानी !!
पिता कै लयमा यी स्टारका छोराहरु !!
शाहरूखकी छोरी सुहानाको पहिलो फिल्म रिलिज
रोनाल्डो र जर्जिनाले गर्दै छन् विहे, स्थान मोरोक्को ?
सत्तारुढ पार्टीको चावी अब पूर्व मावोवादीको हातमा
अन्तत मौरिन्हो टोटेनह्यामको प्रशिक्षणमा !!
यी ४ राशिभएका पुरुषप्रति युवती हुन्छन आकर्षक
शारीरिक सम्पर्क गर्दा पुरूषलाई भन्दा महिलालाई किन बढी फाइदा हुन्छ ! कसरि ?
शारीरिक सम्पर्क गर्दा स्तन मिच्ने कि नमिच्ने ?
डेटिङमा जादा यस्ता कुरा मन पराउँछन् प्रेमिकाहरु